Halıcıoğlu – RayHaber | raillynews
Halicioge shilka Metrobalka, 2 dadka dhaawacmay
Shilkii Halıcıoğlu, waxaa ku dhaawacmay 2 qof: Xero-gooye Halıcıoğlu hortiisa hal qof ayaa sababay shilka. Xero-gooye Halıcıoğlu hortiisa qof hore shil sababay. Gaariga lala galay qofka ayaa lagu tuuray shilka wadada [More ...]
Metrobuska dibedda la dhigo ee ku sii Jeeda Hal Kale Mudo
Magaalo-soo-dejiyaha la soo dejiyey ayaa mar kale ku jiray fasalka: Mid ka mid ah metrobuse-ka la soo dejiyey wuxuu ku fashilmay Buundadii Dahabka ahayd ee Dahabka ahayd. Istanbul Electric Tramway iyo Shaqooyinka tunnel (IETT), 35 Phileas sumadda laga keenay Holland, Ikitelli [More ...]
Socda cusub ee Metrobus
Jid-gooyo cusub oo loogu tala galay Metrobus: Wadad cusub oo lugeynaya ayaa laga dhisayaa Wadada E-5 ee u dhaxaysa Halıcıoğlu iyo Sütlücü. Lugeeyayaasha doonaya inay gaaraan xarunta BRT ayaa uga mahadcelinaya marinka cusub ee lagu dhammeyn doono 1 bil [More ...]
Jid cusub oo lugeynaya ayaa laga dhisi doonaa Wadada D-100 ee u dhaxaysa xaafadaha Halıcıoğlu iyo Sütlüce. Xadgudubka cusub, unugyada 3 ee loogu talagalay muwaadiniinta naafada ah ayaa la gelin doonaa wiishashka. Waxaa laga keenay Magaalada Istanbul ee Dowlada Hoose [More ...]
Tuugada magaalada ayaa burburisay metrobus
Halıcıoğlu'da Haliçoğlu'nde Haliçoğlu'nda metrobus oo weeraraya boosteejada basaska magaalada, waxay bilaabeen inay weeraraan gaariga oo ay tuuraan bambooyin dhawaaqa. Daaqadihii gaariga ayaa burburay, rakaabkii waa argagaxeen. Kooxdu waxay ku qaylinayeen halkudhigyo kala duwan oo ay weheliso shirkadda BRT, [More ...]
Tallaabo xiiso leh oo ah koox haween ah oo aan raaci Karin metrobus
Kooxo haween ah oo awoodi kari waayey inay galaan metrobus, ayaa socod ku maray jihada Avcılar, iyagoo ka bilaabay Çağlayan. Maalin ka hor shilkii ka dhacay Buundada dahabka ee Dahab [More ...]